HYM Hypomyelination-Alika-Weimaraner-Genimal Biotechnologies
Tokantrano > ADN ny Fitsapana > Alika > HYM Hypomyelination – Alika
HYM Hypomyelination – Alika
64, 90€ – 79, 50€ Misafidiana safidy
CD Cone Degeneration - Dog 64, 90€ – 79, 50€
PKD Polycystic Kidney Disease - Dog 64, 90€ – 79, 50€
Manokana ny Weimaraner hamerina
Miteraka : Braque De Weimar A Poil Court, Braque De Weimar A Poil Long
HYM Hypomyelination-Alika habetsahana
Inona no atao hoe HYM Hypomyelination?
Ny HYM dia aretina hita ao amin' ny Weimaraner alika. Izany aretina fahatarana izany dia miteraka hatak' andro ao anatin' ny fotoana hamaliana ny myelin. Miseho amin' ny taona faha 2 herinandro ny aretin' ny aretina. Ny hamafiny ny soritr' aretina dia miovaova araka ny puppies. Ny puppies dia mampiseho tremors manokana amin' ny hind ny tongotra. Ny episodes tremor dia mahazatra kokoa mandritra ny vanim-potoana fanaovana fanazaran-tena, na fientanentanana, na mandritra ny avy ny fanaovana izany.
Azo miteraka ho an' ilay fitsapam-pahaizana: HYM Hypomyelination – Alika
Ny fahatakarana ny vokatra azo avy amin' ilay fitsapam-pahaizana: HYM Hypomyelination – Alika
N/N: tsy misy tahadika ho an' ny mutation HYM. N/HYM: ny boky Mahazatra dia ny tahadikan' ilay mutation HYM. HYM/HYM: 2 ny tahadikan' ny HYM mutation, dia afaka mampivelatra io aretina io ilay alika.
Anaran' ny fitsapam-pahaizana: HYM Hypomyelination – Alika
Gene Mutation: FNIP2 c.880delA
HYM Hypomyelination – Alika sarangaFNIP2 c.880delA)
N/N Tsy misy tahadika ny HYM mutation Zavatra mahazatra ny biby (mazava)
N/HYM tahadikan' ny mutation HYM Zavatra mahazatra ny biby (mazava)
HYM/HYM ny tahadikan' ny mutation HYM Ny biby dia mety hisy fiantraikany.
Latabatry ny fanoroam-andrana: HYM Hypomyelination – Alika
Ray N/HYM 50% N/N
Ray HYM/HYM 100% N/HYM 50% N/HYM
Ohatra momba ny mari-pankasitrahana ho an' ny fitsapana: HYM Hypomyelination – Alika
SKU: hym-hypomyelination-weimaraner Sokajy Alika
40, 00€ – 54, 60€ Misafidiana safidy
L2HGA L2 hydroxyglutaric aciduria – Hoaka Terrier
LOA Late Onset Ataxia – Alika
Génétiques ny + alika iray famille
44, 00€ – 48, 70€ Misafidiana safidy